Uhlu Lokuhlola lwe-WordPress: Uhlu Lokugcina Lwamathiphu, Amathuluzi, Nemikhuba Emihle | Martech Zone
ULwesihlanu, July 20, 2018 NgoMgqibelo, Okthoba 24, 2020 Douglas Karr
Vele namhlanje bengihlangana namakhasimende ethu amabili mayelana nokufakwa kwawo kwe-WordPress. Ngingumthengisi omuhle mayelana nezinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe. Ukuthandwa ngokuphelele kweWordPress kuyisizile impela ngoba iningi labantu besithathu lizohlangana nayo, futhi izingqikithi kanye ne-plugin ecosystem kuhle ngangokunokwenzeka. Ngithuthukise okumbalwa Ama-plugin we-WordPress, nami, ukusiza amaklayenti ethu futhi sisekele imvelo.
Lokho kusho, akuyona ngaphandle kwezinkinga zayo, noma kunjalo. Ngoba ithandwa kangaka uhlelo lokuphatha okuqukethwe, I-WordPress ilitshe eliyinhloko labaduni nabagaxekile kuyo yonke indawo. Futhi, ngenxa yokusetshenziswa kwayo kalula, kulula kakhulu ukwakha ukufakwa okuqhakazile okwenza ukuthi amasayithi agaye ame. Ngokusebenza kubaluleke kakhulu kulezi zinsuku ekusebenzeni nasekusebenziseni ukusesha, lokhu akuhambisani kahle namasayithi amaningi.
Lokho kusho, kuhle ukuthi kunabantu abanjengoBigrockCoupon abenze i-infographics ephelele ukusiza abaphathi be-WordPress. I-infographic yabo, Uhlu lokuhlola lweWebhusayithi leWordPress, inezeluleko nemikhuba engaphezu kwengu-50 ebalulekile kubanikazi bewebhusayithi abangayihlela ekuhambeni kwabo komsebenzi ukuvimbela izingqinamba.
Nalu Uhlu Lwami Lwesondlo Lwe-WordPress
I-infographic inezinto ezimbalwa kakhulu, kepha uma uzimboza lezi ungaphambili kwabaqhudelana bakho! Ngiphinde ngigcine uhlu lwefayela le- ama-Plugin amahle kakhulu e-WordPress esiyihlolile sayisebenzisa… qiniseka ukuyibekisa!
Isipele sedatha yakho ye-WordPress - Ngaphambi kokwenza noma yini nge-WordPress, qiniseka ukuthi unezipele ezinhle ezigcinwa zingasebenzi. Kungakho sisebenzisa i-WordPress Managed Hosting nge ligcina uthi lokuphotha luzungeza. Zinezipele ezizenzakalelayo nezenziwa ngesandla ngokuchofoza okukodwa ekubuyiseleni. Akukaze kudingeke ukuthi silungiselele noma sinike amandla noma yini… babehlala bekhona!
Nikeza i-WordPress ukuhlolwa - Qalisa isayithi lakho ngokusebenzisa Ukuhlolwa kwe-WP futhi uzothola ithani lezinto okufanele uzihlanze ngesayithi lakho. Akuwona wonke udaba oluzokuthinta kanzima - kepha zonke izibalo zokusebenziseka okuncane ziyabalwa!
Ukuhlolwa Kwejubane Lewebhusayithi - Sebenzisa I-Google's PageSpeed ​​Insights ukuhlaziya amakhasi wezinkinga zejubane.
Bheka izixhumanisi eziphukile - Njengoba ngisebenzise amathuluzi amaningi aku-inthanethi, angikaze ngithole lutho olungcono kune Ukumemeza Ixoxo SEO Spider kumasayithi akhasa ngezixhumanisi eziphukile. I-infographic incoma ukufaka i-plugin ukwenza lokhu, kepha lokho kungadicilela phansi ukusebenza kwakho futhi kukungenise enkingeni nomgcini wakho.
Ukuqondisa kabusha okungu-301 kwezixhumanisi eziphukile - Ngaphandle kwamakhasimende ethu abanjwe ne- WPEngine, enokuphatha kwayo ukuqondisa kabusha, wonke amaklayenti ethu asebenzisa i- Ukuqondisa kabusha i-plugin.
Thuthukisa i-WordPress, ama-Themes nama-plugins uye kunguqulo yakamuva - Lokhu kubalulekile kulezi zinsuku unikezwe izindaba zokuphepha. Uma ungomunye walabo bantu abakhathazekile ngokuthuthukisa i-plugin kungaphula isiza sakho, ungahle ufune ukubheka i-plugin entsha. Bonke abathuthukisi banethuba lokuhlola izingqikithi zabo nama-plugins ekukhishweni okuzayo kwe-WordPress.
Susa amazwana ogaxekile - Ngingancoma kakhulu ukuthola Jetpack nokubhalisela i-Akismet ukusiza ngalokhu.
Susa izingqikithi ezingasetshenziswanga, izithombe, nama-plugins asebenzayo, angasetshenziswanga - Ama-plugins enziwe asebenza afaka ikhodi eyengeziwe kusayithi lakho lapho kushicilelwa. Lokho ngaphezulu kunganciphisa isayithi lakho ngakho-ke indlela yakho engcono ukukwenza ngaphandle.
Sula izinguqulo nodoti - Okuncanyana kwe-database yakho, imibuzo ishesha ukudonsa okuqukethwe. Qiniseka ukuthi uhlanza izinhlobo zamakhasi nokuthunyelwe kanye namakhasi asusiwe nokuthunyelwe njalo.
Ukuqapha Ukuphepha Kwewebhusayithi - ligcina uthi lokuphotha luzungeza Asibona abalandeli abakhulu bama-plugins okuphepha, ngincoma ukuthi ngihambele umphathi omkhulu kunalokho. Ithimba labo lihlala phezu kwezokuphepha ngaphandle kokusebenza ngaphezulu kwe-plugin.
Lungiselela Amathebula Esizinda sedatha - Uma ufake izingqikithi nama-plugins ambalwa, iningi lawo lishiya idatha ngemuva ku-database yakho. Lokhu kungangeza ezindabeni zokusebenza futhi kwandise izikhathi zokulayisha njengoba idatha engasetshenziswanga isengabuzwa futhi ilayishwe ukuthi iyabonakala noma cha. I-plugin efakwe kuhlu indala impela, ngingayincoma Ukuhlanza Idatabase Okuthuthukile.
Ukusebenziseka Kwezithombe - Izithombe ezingacindezelwe zingathinta kakhulu ukusebenza kwesayithi lakho. Siyathanda Kraken ne-plugin yayo ye-WordPress yokucindezela izithombe zethu.
Bheka ukungena kwe-imeyili kanye nokusebenza kwamafomu wokuxhumana - Gravity Amafomu Sake sathola isikhalazo esivela kulowo owayezoba iklayenti lokuthi isiza sabo esanda kwethulwa sasinamafomu kepha babengatholanga mikhombandlela. Lapho sihlola le sayithi, sathola ukuthi amafomu kwakungamafomu edummy futhi noma ngubani okungenzeka ukuthi waxhumana nenkampani wathumela kodwa idatha ayizange iye ndawo. Kubuhlungu! Siyisebenzisa NONKE iklayenti!
Buyekeza i-Google Analytics - Kuhlala kumangaza amaklayenti ethu ukuthi ambalwa kangakanani amakhasi awo akhonjiswe ngezinjini zokusesha noma afundwe izivakashi. Sazisa ngokukhethekile Ukugeleza komsebenzisi, umbiko okhombisa ukuthi abantu bazulazula kanjani kusayithi lakho.
Hlola i-Google Search Console - Izibalo zikukhombisa kuphela ukuthi ngubani ofike ngempela kusayithi lakho. Kuthiwani ngabantu ababuke isayithi lakho kumphumela wenjini yokusesha? Well, Webmasters ithuluzi lokubona ukuthi i-Google ilibuka kanjani isiza sakho sezempilo, ukuzinza, kanye nemiphumela yosesho. Bheka idatha yamaphutha bese uzama ukuwalungisa njengoba evela.
Buyekeza okuqukethwe kwakho - Ekubhalweni kwalokhu okuthunyelwe, ngivuselele okungenani okuyingxenye yeshumi nambili engangikukhomba ukuqinisekisa ukuthi kugcinwa kusesikhathini. Uzomangala ngezinkinga ezivela kusayithi lakho ezivela - njengezixhumanisi eziya kumasayithi angaphandle angasekho, izithombe ezingaba nezinkinga, nokuqukethwe okuphelelwe yisikhathi. Gcina okuqukethwe kwakho kukusha ukuze kwabelwane ngakho, kukhonjwe, futhi kube nenani kuzethameli zakho.
Buyekeza isihloko sencazelo nemeta incazelo - Indlela enhle yokwengeza isiza sakho ngezinjini zokusesha ukufaka nokulungisa ama-plugins. Izihloko zizosiza ikhasi lakho ukuthi likhonjelwe kahle kokuqukethwe izincazelo zalo ezembulayo nezemeta ezokuheha abasebenzisi benjini yokusesha ukuthi bachofoze kumiphumela yakho yohlu.
Nayi i-infographic ephelele enezeluleko nemikhuba engaphezu kwengu-50 evela ku- MommyFuck!
Tags: Ukuqondisa kabusha okungama-301 kwezixhumanisi eziphukileIsipele sedatha yakho ye-WordPressShintsha Amaphasiwedi WakhoBheka izikhangiso ze-Adsense kuwebhusayithi yakhoHlola izixhumanisi zokuxhumanaBheka ukungena kwe-imeyili kanye nokusebenza kwamafomu wokuxhumanaBheka izixhumanisi eziphukileHlola amathuluzi we-Google Console (Webmaster)Bheka Izisetshenziswa EzisetshenzisiweBheka izixhumanisi zebha eseceleni nama-BlogrollsBheka ama-Social Media LinksBheka Izibalo Ze-Web HostHlola Ukuphepha KwewebhusayithiBheka Izixhumanisi Zakho ZokulandaBheka Okuphakelayo Kwesayithi LakhoBheka Ukuzulazula Kwendawo YakhoSula UdotiChaza isikhawu sokugcina ngokuzenzakalelaSusa amazwana ogaxekileSusa ama-plugins angafunekiSusa izihloko ezingafunekiKhubaza izibuyekezo ezizenzakalelayo ze-WordPressKhubaza imodi yokususa iphuthaKhubaza ukulandelela emuva kanye nokuphazamisekaUkusebenziseka KwezithombeKhulisa Umkhawulo Wememoriukuskena kwe-malwareAmafayela Ezindaba HlanzaLungiselela Amathebula EsizindaUkuthumela IsondloVuselela i-Header Banner nezithombe zesayithiSusa okusalungiswa nokubuyekezwa kokuthunyelweSusa Abaphathi Bewebhusayithi AbangasebenziVuselela Ukusingathwa NezizindaPhendula AmazwanaBuyekeza i-Google AnalyticsBuyekeza amathegi esihloko seMeta namathegi encazelo yeMetaBuyekeza i-On-Page-SEOBuyekeza Ikhasi Lakho Elimayelana NathiQalisa isayithi Ngokuhlolwa kweWPThatha Izipele Zansuku zonkeUkuhlolwa kwesiphequluli nokuhambisana kwedivayisiBuyekeza usuku lwe-copyright kunyaweni yakhoBuyekeza okuqukethwe kwakhoBuyekeza ama-plugins akho we-WordPressBuyekeza i-WordPress Theme yakhoBuyekeza amawijethi wakho we-WordPressThuthukisa i-WordPress iye kunguqulo yakamuvaUkuqinisekisa Iwebhusayithi YakhoUkuqapha Ukuphepha KwewebhusayithiUkuhlolwa Kokushesha Kwewebhusayithiukuhlolwa kwe-wp
Amasu we-7 we-Ecommerce Wokwenza Okuqukethwe Okuguqukayo